ပညာရေးနှင့်အိုင်တီနယ်ပယ်မှထင်ရှားမှုအချို့ – Eleven Media Group
တယ်လီနော၊ အူရီဒူးစသည့် ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာများ ၀န်ဆောင်မှုစတင်ခြင်း သုံးနှစ်ခန့်ကြာမြင့်လာပြီးနောက် ပြည်တွင်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာ အခြေအနေတစ်ခုတွင် တည်ငြိမ်စပြုလာခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိလူတိုင်း မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်ဆောင်နိုင်ပြီဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် သုံးစွဲနေသော စုစုပေါင်းဆင်းမ်ကတ်အရေအတွက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူဦးရေနှင့် တူညီသောပမာဏသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အင်တာနက်သုံးစွဲမှုအတွက် ဖုန်းအင်တာနက်ကိုသာ အားထားနေရဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်မှာ ဈေးကျပြီး မြန်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားလာသောကြောင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ထင်ရှားကျော်ကြားကဏ္ဍတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
တယ်လီနော၏ စုဘူးအင်တာနက် အစီအစဉ်မှာ တစ်လတာအင်တာနက် အစီအစဉ်များတွင် 500 MB မှာ ၇၉၉ ကျပ်၊2GB အင်တာနက်အစီအစဉ်မှာ ၂၉၉၉ ကျပ်၊5GB အင်တာနက်အစီအစဉ်မှာ ၆၉၉၉ ကျပ်၊9GB အစီအစဉ်မှာ ၁၁၉၉၉ ကျပ်၊ 14 GB အင်တာနက်အစီအစဉ်မှာ ၁၇၉၉၉ ကျပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အူရီဒူး၏ အင်တာနက်အစီအစဉ်သစ်မှာ 350 MB ကို ၆၉၉ ကျပ်၊ 650 MB ကို ၉၉၉ ကျပ်၊2GB ကို ၂၉၉၉ ကျပ်၊3.5GB ကို ၄၉၉၉ ကျပ်၊ 6.5GB ကို ၈၉၉၉ ကျပ်၊ 10 GB ကို ၁၃၄၉၉ ကျပ်၊ 15 GB ကို ၁၉၉၉ ကျပ်နှင့် 20 GB ကို ၂၅၉၉၉ ကျပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။
MPT ၏ အင်တာနက်အစီအစဉ်မှာလည်း 350 MB ကို ၆၉၉ ကျပ်၊ 650 MB ကို ၉၉၉ ကျပ်၊2GB ကို ၂၉၉၉ ကျပ်၊3.5GB ကို ၄၉၉၉ ကျပ်၊7GB ကို ၉၉၉၉ ကျပ်နှင့် 15 GB ကို ၁၉၉၉၉ ကျပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာ သုံးခုစလုံးအနေဖြင့် 4G ကွန်ရက် ချဲ့ထွင်ခဲ့သောကြောင့် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကို အသုံးပြုလာနိုင်ပြီး ယခင်ကထက်ပိုမိုကောင်း မွန်သောအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိလာခဲ့သည်။ ကနဦးတွင် မြို့ပြများ၌စတင်တိုးချဲ့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အခြားမြို့အသီးသီး၌လည်း4G ကွန်ရက်ကို ဆက်လက်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်မှာ ဈေးကျလာသည်ဟုဆိုသော်လည်း ဒေတာအကန့်အသတ်ဖြင့်သာ သုံးစွဲနိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများကဲ့သို့ လစဉ်ကြေးဖြင့်ဒေတာ အကန့်အသတ်မဲ့သုံးစွဲနိုင်သော နေအိမ်သုံး Broad band အင်တာနက်မှာ ကျယ်ပြန့်လာရန် လိုအပ်ချက်များရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သော နှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆင်းမ်ကတ် အလျင်အမြန်တိုးပွားနေသော ထိပ်ဆုံးငါးနိုင်ငံတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် လုံလောက်သွားသော အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ရှိပြီးနောက် ဆင်းမ်ကတ်အလျင်အမြန် တိုးပွားနေသော ထိပ်ဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း Ericsson ၏ အစီရင်ခံစာအရ လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
Posted in ပညာရေးနှင့်အိုင်တီနယ်ပယ်မှထင်ရှားမှုအချို့Tagged ထင်ရှား ကျော်ကြားLeaveaComment on ဈေးကျပြီး မြန်နှုန်းမြင့်လာသော မိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်၊ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေနှင့် တူညီသွားသော ဆင်းမ်ကတ်အရေအတွက်
Posted in ပညာရေးနှင့်အိုင်တီနယ်ပယ်မှထင်ရှားမှုအချို့Tagged ထင်ရှား ကျော်ကြားLeaveaComment on နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာမှ ပြန်လည်အသက်ဝင်လာသည့် RC-2 နှင့် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်)